You are at:Home»Nhau Dzeutano»Ruzivo rwegomarara rezamu
By Munyori weKwayedza on	 November 3, 2017 · Nhau Dzeutano
NDIRI mukadzi ane makore 25 okuberekwa. Kwemwedzi wose wadarika, vanhu vaipfeka mbatya dzeruvara rwepink uye vachikurukura pamusoro pegomarara rezamu. Kwandiri zvinoita sezvinotyisa. Handina ruzivo kuti zvose izvi zviri pamusoro pei. Munhu angazive sei kuti ane gomarara rezamu uye rinorapwa sei?
– Une makore anodarika 40 ekuberekwa here?
– Mumhuri memyu mune nhoroondo yekurwara negomarara rezamu here?
– Kana wakatanga kutevera (kuvanhukadzi) usati wasvitsa makore 12 ekuberekwa uye ndokuzoguma ura wave nemakore 55 uri panjodzi yekubatwa negomarara iri.
– Kuputa fodya zvakanyanya nekunwa zvinodhaka (kunwa mabhodhoro edoro anodarika maviri kana uri munhurume uye rimwe chete pazuva kuvanhukadzi)
– Kudya chikafu chine mafuta akawanda nefibre shoma
– Kuve nemuviri wakafutisa kana kukurisa zvisina tsarukano
– Kusabereka kana kuita mwana wekutanga wave nemakore 30 okuberekwa
– Wakambobatwa negomarara kune rimwe remazamu ako
– Kugara uchinzwa kushungurudzika